"Avelao ny zaza hanatona Ahy, ary aza raràna; fa an’ ny toa azy ny fanjakan’ Andriamanitra". - Mar. 10:14.
Hitan'i Jesôsy tao amin'ireo ankizy izay nentina teo Aminy ireo lehilahy sy vehivavy izay tokony ho mpandova ny fahasoavany sy ho olon'ny fanjakany (...) Tamin' ny fampianarany dia nidina ho eo amin'izay takatr'izy ireo Izy. Izy, ilay Mpanjakan'ny lanitra, dia tsy nanao ho zavatra ambany ny famaliana ny fanontanian'izy ireo ary notsoriny ny lesona sarobidy nampianariny mba hifanitsy amin'ny fahatakaran'izy ireo araka ny nahazaza azy, Namboleny tao an-tsain'izy ireo ny voan'ny fahamarinana izay hitsimoka any aoriana any ka hamoa voa ho amin'ny fiainana mandrakizay.
Marina mandrakariva fa ny ankizy no mora andairan'ny fampianaran'ny filazantsara indrindra; misokatra ho amin'ny hery miasa manginan'Andriamanitra ny fon'izy ireo, ary manana ny hery hitehirizany ny lesona noraisiny. Ny ankizy kely dia afaka ny ho Kristianina, afaka manao fanandramana mifanaraka amin'ny taonany. Tokony hobeazina ny amin'ny zava-panahy izy ireo, ary tokony homen'ny ray aman-dreny azy ireo ny tombontsoa rehetra hahafahany manana toetra manahaka ny toetran'i Kristy (...)
Afaka ny ho fitaovana ampiasain’Kristy hitaomana ireny ankizy ireny ho eo amin'ny Mpamonjy ny Kristianina.
Azon'ny kristianina atao ny mampifamatotra amim-pahendrena azy ireny amin'ny fony, (...) sy hahita azy ireny ho voaova toetra noho ny fahasoavan'i Kristy, ka ho azo lazaina hoe izy: "an'ny toa azy ny fanjakan’Andriamanitra. "
Tian'Andriamanitra ho zanany ny ankizy rehetra mba ho anisan'ny ankohonany.Na firy taona ria firy taona ny tanora, dia afaka ho anisan'ny ankohonan'ny finoana ary hiaina ny fanandramana sarobidy indrindra (...) Ny fon'izy ireo dia afaka ho voataona ho amin'ny fahatokiana sy fitiavana an'i Jesôsy ary ho velona ho an'ny Mpamonjy. Hataon'i Kristy misiônera kely izy ireo. Afaka ho voaova ny fironan'ny fisainan'izy ireo manontolo, ka tsy ho zava-manintona no ho fijeriny ny fahotana, fa ho zavatra natao handosirana sy hankahalaina.
Maniry fatratra hamonjy ny tanora ny Mpamonjy. Ho fifaliany ny hahita azy ireo hanodidina ny seza fiandrianany, hitafy ny akanjom-pahamarinany fotsy tsy misy pentina. Manantena Izy ny hametraka eo amin'ny lohan'izy ireo ny satroboninahitra fiainana sy handre ny feo fifalian'izy ireo hiombona hiara-midera sy mankalaza an'Andriamanitra sy ny Zanak'ondry amin'ny hirampandresena izay hanakoako manerana ny fanjakan'ny lanitra.